तस्बिरमा निलो घेरा भित्रका दुईजना विद्यार्थी प्रिन्सी धामी र समिरा व्याँजन्कारको काठमाडौँ केएमसी अस्पतालमा उपचार हुदै छ , तस्बिर, साभार ढाका ट्रिब्युन
काठमाडौँ . सोमबार दुर्घटना भएको युएस बंगला एयरलाइन्समा बंगलादेशमा एमबिबिएस पढ्ने एकै कलेजका १३ जना परेका छन् ।
१३ जना मध्ये ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
बंगलादेशबाट प्रकाशित हुने ढाका ट्रिब्युनले यस सम्बन्धि समाचार लेख्दै १३ जना मेडिकल विद्यार्थी बंगलादेशको सिलहटस्थित राजिव रबेया मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएका ४९ मध्ये २२ जना नेपाली परेका छन् ।
कलेजले यस घटनापछि कलेजमा तीन दिनको शोक मनाउने निर्णय गरेको पनि ढाका ट्रिब्युनले छापेको छ .
चितवन । सोमबार सांँझ वरिष्ठ न्यूरो सर्जन बालकृष्ण थापा आउंँछन् र शल्यक्रिया गर्छन् भन्ने पर्खाइमा एक बिरामी कुरिरहेका थिए । बिहीबार भरतपुरको एलाइभ अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका पर्वतका ६५ वर्षीय पीताम्बर सापकोटा अकस्मात